I-ROI yeendaba zeNtlalo | Martech Zone
I-ROI yeendaba zeNtlalo
NgoLwesithathu, Agasti 1, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Sele sine-infographics sendleleni zi nganiswa imidiya yokuncokola… kwaye njani ayinakuthelekiswa nanto Ngu… kodwa ngaphambi kokuba uzamle kwaye ujike kude ndingathanda ukukunika le. Izolo ebusuku, uMarty Thompson kunye nam besithetha nje ngale nto. Iinkampani ezininzi aziyi kuqhubela phambili ngesicwangciso seendaba zosasazo ngenxa yokunqongophala kwemilinganiselo. Ezinye iinkampani zitsibela kuyo ngaphandle kokuqonda ukuba inokuba yintoni na ifuthe.
le infographic evela kwi-MDGAukuthengisa wenza umsebenzi olungileyo wokubonelela ubungqina bobabini obunokubakho kunye nezibonelelo ezingaphathekiyo kwimidiya yoluntu, kunye nezibonelelo zexesha elide kunye nexesha elifutshane. Inyani yile yokuba impendulo iyindawo ethile embindini. Awunakho ukulinganisa kwangoko yonke imbuyekezo, kodwa ixesha elide ukubuya kuya kuqhubeka nokwanda.
Amaqhinga okuSebenza ngokuTwitter